China AC Power Station Pure Sine Wave Portable Powering Car Refrigerator TV Drone Laptops ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |Goldencell
ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ဘေးအန္တရာယ် တိုက်ဖျက်ရေး မော်တော်ကား စတင်ခြင်း။
ဒစ်ဂျစ်တယ် အားသွင်းသည့် မိုဘိုင်းပါဝါ
၎င်းကို တောင်တန်းဒေသများ၊ ခရစ်ယာန်ဓမ္မသင်တန်းကျောင်းများ၊ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများ၊ ခရီးသွားခြင်းနှင့် အပန်းဖြေရန်အတွက် အပြင်ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်မီးမရှိဘဲ ကား သို့မဟုတ် လှေများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။အလင်းပေးရုံသာမက အခြားသော ဝန်များကိုပါ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှာ သေးငယ်ပြီး လက်ရာမြောက်ကာ သယ်ဆောင်ရအဆင်ပြေကာ အသုံးပြုရမှာလည်း စိတ်ချရပါသည်။၎င်းကို ကယ်ဆယ်ရေး၊ အရေးပေါ် ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ အရန်ပါဝါထောက်ပံ့မှု စသည်တို့တွင် အသုံးပြုသင့်သည်။
သိုလှောင်မှုနှင့် စက်ရပ်ချိန် ထိန်းသိမ်းခြင်း-
1. အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ နှင့် အသက်ရှည်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် အနည်းဆုံး ရက် 90 လျှင် တစ်ကြိမ် အားအပြည့်သွင်းရန် အကြံပြုထားသည်။
2. Output ပြီးသွားပါက စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို သက်သာစေရန် မာစတာကို ပိတ်ရန် မမေ့ပါနှင့်။
3.ဘက်ထရီ၏ ဓာတုဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်၊ ဘက်ထရီ၏ ရရှိနိုင်သော စွမ်းရည်သည် အေးသောရာသီဥတု သို့မဟုတ် အပူလွန်ကဲခြင်းကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည် (အအေးခံပန်ကာကို သင်ကြားနိုင်သည်)။ထို့ကြောင့် ၎င်းကို အခန်းအပူချိန် (0°C-40°C) တွင် အမြဲသုံးပါ ပြင်ပသိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပြုလုပ်ရန် အကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ။
4. အကယ်၍ သင်သည် sub-zero condition တွင် နေထိုင်နေပါက၊ သင့်ယူနစ်ကို insulated cooler တွင်ထားကာ ပါဝါရင်းမြစ် (ဆိုလာပြားများ) နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။သဘာဝအပူမှထုတ်ပေးသော ဘက်ထရီပမာဏကို ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးတွင် ထိန်းသိမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
5. အတွင်းဘက်ထရီအိတ်များသည် ဖြုတ်တပ်၍မရသော၊ တပ်ဆင်မရသော၊ အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းအတွက် သက်တမ်းသည် အကြိမ် 500 ကျော်သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် ပျက်သွားပါမည်။
6.ဘက်ထရီကို 0% သို့ စဉ်ဆက်မပြတ် အားသွင်းပြီးနောက် ၎င်းကို ဘက်ထရီအလွတ်ဖြင့် သိမ်းဆည်းခြင်းသည် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို လျော့ကျစေပါသည်။အနည်းဆုံး 20% ပမာဏကို အသုံးမပြုဘဲ အမြဲထားရန် အကြံပြုထားသည်။
ကုသိုလ်ကံ အားသွင်းအမျိုးအစားများ အလုပ်အမျိုးအစားများ
2KWh 12.8V165Ah 14.4V10A အားသွင်းကိရိယာ
ယခင်- JGNE 1000W အိတ်ဆောင်ပါဝါဘူတာရုံ DC / AC အင်ဗာတာဖြင့် အရေးပေါ် ပါဝါထောက်ပံ့မှု
နောက်တစ်ခု: AC 220V/110V Pure Sine Wave Output Portable Power Station 12.8v အိမ်အပြင်ဘက် ပါဝါထောက်ပံ့မှု
JGNE 1000W အိတ်ဆောင်ပါဝါဘူတာ အရေးပေါ် မီးဖို...